ပန်ဒိုရာ: မလေးလည်းဆယ် လေးလည်းဆယ်
ခပ်ပေါ့ပေါ့ ခပ်ပါးပါး ဒီလိုပဲ အူဝဲကစ မြစ်ဖျားချောင်းဖျားအခြေချ အမေ့ကျောင်းတက်ပြီး စောစောစီးစီး ကကြီးခခွေးဖတ်တော့ အနှောင်းကို သေချာမသိလည်း အစအတော်လှခဲ့သူ၊ လူစိမ်းကြောက် မျက်မှန်ကြောက် ခဏခဏငိုလည်း ကျောင်းမနေခင်ကတည်းက စင်ပေါ်တက် ကျောင်းစာအုပ်တွေထဲ မပါတဲ့ ကဗျာကိုရွတ်သူ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မျက်နှာကြောတင်းသွားမှန်းမသိ တွေးရင်းတည်မိ စာအုပ်များကိုင်လိုက်ရင် မျက်စိမမြင် နားမကြားသူ၊ ဒါရိုက်တာကြမ္မာကျီစယ်လို့ တက်ရတဲ့ဒီဂရီကျောင်းမှာ ပျော်ရမှန်းမသိတတ်ပဲ လူငယ်ဘဝ လေးငါးနှစ်စာကို ခပ်ပြိန်းပြိန်း အလွတ်ကျက် ဖြုန်းတီးခဲ့သူ၊ အသည်းဟစိဟစိဖြစ်လိုက် ကွဲလိုက် ဆက်လိုက် အက်လိုက် ထုံခဲသွားလိုက် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကို သဲပွင့်တစ်ပွင့်ချင်း စီကာစဉ်ကာ တည်ဆောက်ပြီးမှ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ တောင်ကုန်းကိုပြန်ဖြိုမယ့် ဒိုင်းနမိုက်ကို လှည့်မကြည့်စတမ်း မီးတို့တတ်သူ၊ သွေးရင်းထဲ စစ်သားမရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိ လွှတ်တော်အမတ်မရှိ ဆယ်လစ်ဘရစ်တီမရှိ ခပ်ပြားပြားဇာတ်မို့ ရင်နာလှိုက်ဖိုမောစရာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် မတင်ဆက်နိုင်သူ၊ ယုံကြည်တာရယ် သေချာမှုရယ်ကြားက ပဋိပက္ခမှာ ဦးနှောက်ကိုခင်းကျင်း ကျောက်စရစ်ခဲအလုံးကြီးတွေ အရင်ထည့် ပြီးတော့မှ သဲထည့် နောက်ဆုံးမှ မလွတ်စတမ်း ရေကိုထည့်လည်း တစ်စက်တောင် မလျော့ချင်သေးသူ၊ ငြီးငွေ့မှုကို ကြောက်တိုင်း သတ်ပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ညှိနှိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ် ကန်ထိုးရှာရင်း ပြေးလွှားအသက်ဆက်နေသူ၊ ပေါ့ပေါ့နဲ့ပါးပါးပါပဲ ပူနွေးလာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ နေရာတကာ ကျစ်လျစ်မှုတွေ အရည်ပျော်လာချိန်ဆိုတော့ မကြီးသေးငြားမငယ်တော့ငြား ဆောလစ်အဖတ် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေ ရှိနေသေးသရွေ့ မလေးလည်းဆယ် လေးလည်းဆယ်။
You have rewarded yourself withaself-written beautiful poem for your 40th birthday. I hope I'm not wrong with it. Happy 40th BD Pan!
I'm sure you are now enjoyinganew chapter of your life asamother with your lovely baby girl. Wishing you all the best.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသစ်တိုးလာတဲ့ ကဗျာမှော်ဆရာ လေးဂဏန်းမန်ဘာအား လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်